Waste Landfill Bulldozer SD7HW - China Xuanhua Ukwakhiwa Imishini
ngogandaganda SD7HW kuyinto 230 amahhashi ithrekhi-uhlobo dozer nge sprocket ephakeme, amandla shift drive, Izilawuli lulwimi ngendlela elukhuni okwesikhashana futhi wokubacindezela. SD7HW-230 amahhashi, ephakeme sprocket ngogandaganda ukuhlanganiswa ne design Modular kulula ukulungisa & yesondlo, It aqede amafutha umehluko ingcindezi, uhlelo wokubacindezela isebenza ukuvikela imvelo bese ugcine amandla nge high kahle zokusebenza. isimo sokuphepha operation ntofontofo, ukuqapha kagesi RoPS gumbi okunokwethenjelwa lonke Qual ...
ngogandaganda SD7HW kuyinto 230 amahhashi ithrekhi-uhlobo dozer nge sprocket ephakeme, amandla shift drive, Izilawuli lulwimi ngendlela elukhuni okwesikhashana futhi wokubacindezela.
SD7HW-230 amahhashi, ephakeme sprocket ngogandaganda ukuhlanganiswa ne design Modular kulula ukulungisa & yesondlo, It aqede amafutha umehluko ingcindezi, uhlelo wokubacindezela isebenza ukuvikela imvelo bese ugcine amandla nge high kahle zokusebenza. isimo sokuphepha operation ntofontofo, ukuqapha kagesi RoPS gumbi okunokwethenjelwa lonke izinga, ngemisebenzi emihle kuyinto olikhethayo ohlakaniphile.
SD7HW nge aphansi emhlabathini ingcindezi kuyinto umshini ekahle elisetshenziswa izibi handling.
(angafaki Ripper) Ukusebenza isisindo ( kg) 2 5670
Ground ingcindezi (K Pa ) 51.96
Min. phansi imvume (mm) 484
Max. ukumba ukujula (mm) 635
Ubukhulu sekukonke ( mm ) 5245×4382× 3482
Inombolo yenethiwekhi ezinamasondo (ohlangothini ngalunye) 1
W idth of izicathulo (mm) 760
Previous: Isigqugquzeli-ukushayela Bulldozer SD9
Okuphakeme-ukushayela Bulldozer SD8N
Isigqugquzeli-ukushayela Bulldozer SD9